Kalakhabar:: किन देखाउछन त, हरेक कलाकारले आखिर यस्तो हविगत ?
किन देखाउछन त, हरेक कलाकारले आखिर यस्तो हविगत ?
प्रकाशित मिति : Friday, December 1, 2017
काठमान्डौ,१५–मंसिर, राजकुमार राई , कयौ कलाकारले आफू चर्चाको शिखरमा आउनकै निम्ति हरेक गतिविधि अपनाउने गर्नछन् । कसैले अर्धनग्न शरीर देखाउने गर्छन त कसैले पुरै अश्लिलता देखाउने गर्छन् । तर नायिका सुष्मा कार्की आफैमा स्थापित र चर्चित नायीका हुन् । त्यसो त के उनले यस्तो अर्धन नग्न शरीर देखाउन आयश्य थियो त ? दर्शकले विकिनी अवतारमा यस अगाडि पनि देखेकै हुन् । सुष्मा कार्कीको चर्चा चलचित्र क्षेत्रमा अभिनय भन्दा यस्तै बोल्ड शैलीले बढी भएको थियो ।
चलचित्रमा पनि सुष्मालाई दर्शकले नायिका भन्दा आइटम गर्लको रुपमा बढी रुचाए । सुष्मा आइटम गीतमा बोल्ड बनिन् । फोटोसुटका क्रममा उनका पहिरन छोटिए । विकिनी लगाएर उनले जवानी शो गरिन् ।
तर, चलचित्रमा अहिले उनको सक्रियता पहिलेको जस्तो छैन । सुष्मालाई लिएर निर्माताले जोखिम मोल्न चाहदैनन् । सुष्मा भने फेसबुकमा बिन्दास शैलीमा तस्बिर राखेरै मस्त छिन् ।
हालैमात्र उनले, पाँच तारे होटलको स्विमिङ पूलमा पौडिदा खिचेको केही विकिनी तस्बिरले चर्चा पाएको छ । रातो विकिनीमा सुष्माले पौडी मात्र खेलिनन्, पोज(पोजमा तस्बिर पनि खिचेकी छिन् । सुष्माको यो अवतार फेरि दर्शकले पर्दामा देख्न पाउलान् ?